Ntughari - Nkuzi Cognitive
Nchịkọta ederede metụtara asụsụ na mmezigharị ọgụgụ isi
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » ghara ịgbanwe
Mmetụta nke teknụzụ ọhụụ n'ịgwọ ọrịa na-akpata ọrịa strok
"Egwuru egwu" ya na ndi isi oru. Ọ na-akawanye ụtọ na ntụrụndụ?
Aphasia na kompeni na kọmputa. Nchikota nke ozuzu oke na iku asusu
Ike dị anya na dyslexia. Meziwanye ọgụgụ n’agụghị agụ
Mmezi nrụzigharị telefon mgbe ihe gbasara ahụrụ
Usoro ọgwụgwọ, coronavirus na tele-rehabilitation: akwụkwọ bara uru
Na ibe a, anyị na-anakọta akwụkwọ metụtara Coronavirus na-akpọtụ aka na mpaghara nke mmasị n'ịgwọ ọrịa okwu. Arụ ọrụ Clinical FLI na CDA Ndị na - agwọ ọrịa Okwu - Ntuziaka na [...]